ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်တော့ဘူးညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်မသာ။ ဒါပေမယ့်သင့်ဇနီး၊ရည်းစားတွေကိုလျစ်လျူရှုထားတတ်တာကိုသင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးနှင့်စွဲနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်တဲ့စုဆောင်းမှုရှိသည်။ အဆိုပါအမျိုးမျိုးငါတို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှအဓိကအမျိုးအစားကနေဂိမ်းထည့်သွင်းဖို့သေချာအောင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှကြွလာ။ ကြှနျတေျာ့ဆိုက်ပေါ်မှာလာလတံ့သောမည်သည့်လူကိုငါတို့သည်မီးတောက်ဂိမ်းခဲ့ကြသောအခါနောက်ကျောဖြစ်နိုင်သမျှစဉ်းစားဘယ်တော့မှခဲ့ကြကြောင်းနည်းလမ်းများအတွက်မိမိကိုမိမိစိတ်တော်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်။, ဂိမ်းလုပ်ငန်းကသင်အကြိုက်ဆုံးညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်ကိုရွေးချယ်မှာမို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးစွဲငြိဖွယ်ရာဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူကထင်ကြမှာလဲ။ ကောင်းပြီ,ငါတို့ပြန်မသိခဲ့ပါဂိမ်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်မီနူးမှတဆင့်ဇာတ်ကောင်အဖြစ်ကြိုက်နှစ်သက်ညစ်ညမ်းကြယ်ပွဖွင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်ဤမျှလောက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင်းစိတ်ကြိုက်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူလိင်မူရင်းညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်နို့စို့ကြည့်နှင့်ငြိုငြင်လာပြီထက်ပိုပျော်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်နိုင်ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ရုပ္ရွင္ၾကည့္ရတာထက္ဂိမ္းကပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းေနပါတယ္။
ဒါ့ကြောင့်လိင်စိတ်ဖြေဖျောက်ဖို့အတွက်သင့်အကြိုက်ဆုံးညစ်ညမ်းစတားမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါဟာသင်ချင်မဆိုစိတ်ကူးယဉ်အတွက်ချင်မဆိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါပဲ။ သင်ရုံစနစ်တကျဤဂိမ်းသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်ပါတယ်,သင်အမှန်တကယ်သင်သည်သင်၏ဘောလုံးထွက်လုပ်လိမ့်မည်ဟုအတွေ့အကြုံများရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အမြင်တစ်ခုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အနေဖြင့်,အရာအားလုံးဒီစုဆောင်းမှုနှင့်အတူထွက်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဤဂိမ်းအသစ်များသည်လုံးဝလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းအဆင်သင့်ဖြစ်သည်၊မည်သည့်ကိရိယာပေါ်တွင်မဆိုသင်လာသည့်ဂိမ်းနှင့်အတူ၊အားလုံးသည်သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်ရှိသည်။ ဆိုက်လည်းထူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်အကြောင်းပို! အခုတော့ဂိမ်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လိင်ဂိမ်းအပေါ်သွားတိုက်ပါလိမ့်မယ်ပြောတဲ့အခါ,ငါတို့သည်သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ပြောနေတာပါပဲ,ဤဂိမ်းအချို့ကိုသင်ပင်သင့်ရဲ့ဖုန်းမှသင်၏အပွိုင့်,သင်စာသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာခစျြ. ကဲပိုလေးနက်တဲ့မှတ်ချက်လေးမှာတော့ဘယ်ယောက်ျားကိုမှအကြောင်းမထူးပါဘူး။ အနိုင်နိုင်ဥပဒေရေးရာဆယ်ကျော်သက်ချစ်သူများနှင့်အတူစတင်ပြီးနှင့်ဂလီနာသို့နေသောသူတို့နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရေး၊ကျနော်တို့ခွဲနှင့်ကြီးစိုးသားငယ်များ၊ကျနော်တို့အဖြူရောင်၊အနက်ရောင်၊အာရှနှင့်လက်ရှမီး၊ဒါပေမယ့်လည်းအချို့သောအိန္ဒိယသူငယ်။, ကျနော်တို့ပိန်လှီမင်းသမီးနှင့်အဖြစ်သင်အချို့ဂိမ်းအတွက်စိတ်ကြိုက်ကနေသူတို့ကိုလုပ်အဖြစ်ဘီဘာအိုရှိသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိသည်သမျှသောရုပ်ပြောင်လိင်ဂိမ်းများကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်သည့်အခါထိုအသင်သည်သင်၏မျက်စိယုံကြည်မည်မဟုတ်။ ကာတွန်းတွေ၊ကာတွန်းတွေ၊ကာတွန်းတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကနေသိလာတဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူပါလာပါတယ်။
ထိုအသင်တို့ကိုဤသူငယ်၏ထားနိုင်သည့်မှတဆင့်မျိုးလည်းမြောက်မြားစွာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပြင်းထန်မှုအဆင့်ဆင့်အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ အချို့ဂိမ်းများကသင့်အားအတွေ့အကြုံများကိုပေးသည်။ အခြားသူများကသင့်အားအပြစ်ပေးရန်ကျေးကျွန်များကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်ပင်ကြမ်းတမ်းဒိုမီနိုနှင့်အတူစန်တာလေ့ကျင့်ရေးကွင်း၌,ကျွန်နေသောအတွက်ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်ရှိအခြားဂိမ်းများ၊ပရိုဂရမ်အမျိုးအစားတွင်အချို့သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်များနှင့်စွန့်စားမှုများကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။, သငျသညျမျိုးစုံဇာတ်ကောင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအပြန်အလှန်ရ,သင်သည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအရေးအရာအတွက်နှစ်ဆဂိမ်းစတိုင်ရလိမ့်မယ်နှင့်ဤခေါင်းစဉ်အချို့ကိုသင်ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်အဆင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ပင်အချို့သောစစ်မှန်တဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းအစည်းအဝေးများခံစားနိုင်,ပစ္စည်းများစုဆောင်းနှင့်ဟေးအတူတကွချ.
ဤကိစ္စတွင်အတွက်လင်ပန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေလို့ပြောလို့ရပေမယ့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျငွေရှာတာကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှုပိုရှိစေပါတယ်။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆိုက္ကဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်,သန့်ရှင်းတောက်ပနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော။ ငွေထည်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ငွေထည်ပစ္စည်းလိုပေါ့။ သင္တို႔၏ဆိုဒ္တြင္လိုအပ္သည့္အိုင္အိုဒင္းသံုးကိရိယာမ်ားကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။သင္တို႔တြင္သင္တို႔၏ဂိမ္းမ်ားႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုမွတ္ခ်က္ေပးရန္(သို႔)ေဝငွရန္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိပါသည္။ဤသို႔ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္မလိုပါ၊မွတ္ပံုတင္ျခင္းလံုးဝမပါပါ။ အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ဂိမ်းသို့မဟုတ်မှတ်ချက်ပေးရန်စဉ်သင်နေသောသူကိုသိနိုငျသညျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်အလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့ပင်မဟုတ်ပါ။, သူမညစ်ညမ်းဂိမ်း၏လုပ်ရပ်အတွက်သင်ဘမ်းလျှင်သာသင့်ဇနီးကိုသိပါလိမ့်မယ်။